Itoyota factory, abahlinzeki - china Toyota abakhiqizi
I-crankshaft ejwayelekile yemoto yeToyota1Y
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Toyota1Y
I-Ductile iron crankshaft round corner rolling ukuqinisa kuzosetshenziswa kabanzi ekucubunguleni i-crankshaft. Ngaphezu kwalokho, izinqubo zokuqinisa izinto ezifana nokuqinisa ukugoqa ekhoneni nxazonke kanye nokuqedwa kwephephabhuku kuzosetshenziswa kabanzi lapho kucutshungulwa i-crankshaft. Izindlela zokuqinisa i-crankshaft zensimbi zizoba ngaphezulu Umhlabathi uyacinywa ngejenali nangamakhona ayindilinga.
Le nkampani inobuchwepheshe obuthuthukile kanye nemishini ephelele yokuhlaziya nokuhlola. Okokuqala embonini ukwedlula i-ISO9001-2000 ne-TS16949: isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ka-2009. Izimpahla ezihleliwe ezikhona zingu-150 million yuan. Njengamanje, inkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-20,000, indawo yokwakha engama-28,000 square metres, abasebenzi abangu-180, amasethi angaphezu kuka-200 okucubungula nokuhlola imishini, imigqa yokukhiqiza engu-2 yensimbi ebunjiwe ngesihlabathi, kanye no-4 machining ukukhiqizwa imigqa. Inqubo yokukhiqiza nezindlela zokuhlola zilandela ngokuqinile izindinganiso zaseJalimane.
I-Excellencear crankshaft yeToyota1FZ
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo: Toyota1FZ
I-crankshaft ingenye yezingxenye ezijwayelekile futhi ezibalulekile zenjini. Umsebenzi wawo ukuguqula ingcindezi yegesi edluliswa ngenduku yokuxhuma i-crankshaft ibe yi-torque, esetshenziswa njengamandla okukhipha umsebenzi, ukushayela ezinye izindlela zokusebenza, nokushayela imishini esizayo yenjini yomlilo yangaphakathi ukuthi isebenze. Lokhu kusho ukushesha nodlame, okuhambisana nokuguquguquka okuphezulu kokuguqa, amandla aphezulu we-torque nokudlidliza, okuholela ekucindezelekeni okuphezulu kakhulu nokuguquguqukayo. Ukucindezeleka okunjalo ngokweqile kudinga ukwakheka nokubala ngokucophelela, ukukhethwa kwezinto ezifanele kanye nobuchwepheshe bokucubungula i-batch.
Kwama-crankshafts akhiqizwa ngobuningi, ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yomkhiqizo, ulayini wokukhiqiza we-nitrogen we-nitrocarburizing gas olawulwa yi-microcomputer ngokuzayo uzokwamukelwa ngokuzayo. Umugqa wokukhiqiza we-nitrogen osuselwa enitrogen wenziwa ngomshini wokuwasha wangaphambili (ukuwasha nokumisa), isithando somlilo esishisayo, isithando somlilo se-nitrocarburizing, ithangi likawoyela elipholisayo, umshini wokuwasha ongemuva (ukuwasha nokumisa), uhlelo lokulawula nokusabalalisa igesi nezinye izinhlelo.
Kusukela yasungulwa, inkampani ibilokhu inamathela kunqubomgomo yebhizinisi "yokuqinisekisa ikhwalithi, isuselwa kusisekelo, insizakalo eqotho, nokusizakala ngokuhlanganyela", futhi izinikele ekufuneni intuthuko efanayo kanye nenqubekela phambili yamakhasimende ethu, futhi sibonga ngobuqotho kubangani abavela kuzo zonke izizinda wempilo abanokusekelwa kwesikhathi eside nokukhathalela inkampani!